Advanced Diploma in Business Management (ADBM) နှင့် Advanced Diploma in Finance & Banking (ADFB) | Mizzima Myanmar News and Insight
Advanced Diploma in Business Management (ADBM) နှင့် Advanced Diploma in Finance & Banking (ADFB)
Advanced Diploma in Business Management (ADBM) နှင့် Advanced Diploma in Finance & Banking (ADFB) အစရှိတဲ့ Business နှင့် Finance & Banking ဘာသာရပ်တွေကို လေ့လာသင်ယူပြီး Advanced Diploma ဘွဲ့ရယူလိုသူတွေအတွက် အချိန်ပိုင်းသင်တန်းတွေကို STI Myanmar University ၏ ( Yangon Campus II ) ရွှေဘုံသာတွင် November လမှ စတင်ဖွင့်လှစ် ပေးသွားမှာပါ။
STI Myanmar University ၏ ရွှေဘုံသာ Campus တွင်သင်ကြားပို့ချနေသော Certificate, Diploma, Advanced Diploma အချိန်ပိုင်းသင်တန်းများမှတဆင့် University of Bedfordshire, UK မှ BA(Hons) Business Administration နှင့် BA(Hons) Accounting - Final Year အတန်းသို့တိုက်ရိုက်ပေါင်းကူးတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
STI Myanmar University ရဲ့မိတ်ဖက်တက္ကသိုလ်ဖြစ်တဲ့ University of Bedfordshire (UoB) ဟာ ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ အစိုးရ တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင် လက်ရှိမှာ ကျောင်းသား ၂ သောင်း ၄ ထောင် တက်ရောက်လျက် ရှိပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်လည်း ကျောင်းသား ၃၀၀၀ ကျော်ရှိသော အထင်ကရတက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု ဆုတံဆိပ်ဖြစ်တဲ့ The Queen’s Award အပြင် အခြားဆုတံဆိပ်ပေါင်းများစွာ နှစ်စဉ်ရရှိထားပြီး အစဉ်အလာမပျက် အောင်မြင်မှုများနဲ့ ထုံမွှမ်းထားတဲ့ အဆင့်မြင့် တက္ကသိုလ်ဖြစ်တဲ့ UoB ကနေ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းဘွဲ့ကို အခုပဲရယူလိုက်ကြပါစို့နော်။
၁၉ သိန်း ၉ သောင်း ကျပ် (စာမေးပွဲကြေးထပ်မံ ပေးသွင်းရန်မလို)
Installment Plan နှင့် တက်ရောက်လိုသူများအတွက်
1st Installment - ၄သိန်း ၉သောင်းကျပ်
2nd Installment to 6th Installment - ၃ သိန်းကျပ်စီ
စနေ - နေ့လည် ၁၂ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီ ထိ
တနင်္ဂနွေ - မနက် ၉ နာရီခွဲ မှ ညနေ ၄ နာရီခွဲ ထိ
တနင်္လာ မှ သောကြာ - မနက် ၉ နာရီ မှ နေ့လည် ၁၂ နာရီ ထိ
သင်တန်းကာလ - (၁) နှစ်
1. Project Management in Practice
7. Advanced Organizational Behavior
8. Managerial Accounting
Advanced Diploma in Finance & Banking
1. Principles of Financial Management-II
2. Principles of Banking
6. Banking Technology
အမှတ် ၃၇၇၊ ရွှေဘုံသာအထက်လမ်း၊ ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်းနံပါတ် 01 377988, 01 378166, 09 420131730, 09 420183155, 09 420254872
လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်တွေအရ ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမည့်နေရာများကို...
သမ္မတ ဘိုင်ဒင်က အာရှအတွက် ဘယ်လိုလူဖြစ်မှာလဲ
အစာအိမ်ရောဂါကုဆေး RBC က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို နှိမ်နင်းနိုင်...
လူထုရဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ယုံက...
အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်နေ့အတွက် သိထားသင့်တဲ့ COVID-19 နောက်ဆုံးရသတင်းများ
စူပါမန်းလိုမျိုး ခံစားခဲ့ရတယ် ဆိုပြီး လူထုစည်းဝေးပွဲမှာ သမ္မတ ဒေါ်နယ...
တန်ဖိုးနဲအသီးအရွက် ၃မျိုးကို ၁၀၀၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် တောင်ဒဂုံမြို့နယ်တွ...
STI Myanmar UniversityAdvanced Diploma in Business Management (ADBM)Advanced Diploma in Finance & Banking (ADFB)